Fisotroan-dronono : tsy manan-kery intsony ny karatra taloha | NewsMada
Tsy hanan-kery intsony ny karatry ny zokiolona mpandray vola fisotroan-dronono nosoloina ny volana novambra lasa teo amin’ny toerana 52, manomboka ny volana febroary izao. Ho an’ireo karatra nohavaozina ny volana desambra kosa, tsy azo ampiasaina izany manomboka ny volana marsa izao, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny fitantanam-bolan’ny mpiasam-panjakana, Razafintsalama Ihanta, omaly teny Antaninarenina. Rehefa tsy maka ny karatra vaovao ny mpandray vola fisotroan-dronono, noheverina ho toy ny maty ka tapahina avy hatrany koa ny fandoavana ny volany, araka ny fanazavana ihany. Nanomboka ny volana novambra, fotoana nanavaozana ny karatra, nahatratra 6 000 ny zokiolona efa maty ka tsy hahazo ny vola fisotroan-dronono intsony. Mitentina 10 miliara Ar ny sora-bola tsy hivoaka amin’ny kitapom-bolan’ny fisotroan-dronono isan-taona. Havaozina isaky ny roa taona ny karatry ny zokiolona hanadiovana ny fizarana ny vola fisotroan-dronono. Hitety ny faritra Sava ny teknisianina hanavao ny karatra amin’ity janoary ity.
Mpiasam-panjakana ambony 866, tsy tokony hisitraka ny tombontsoa
Manadio ny fitantanana ny vola fisotroan-dronono sy ny fizarana ny karaman’ny mpiasam-panjakana ny minisiteran’ny Tetibola, mbola misy 4 594 ny mpiasam-panjakana manana andraikitra ambony misitraka ny karama sy ny tombontsoa maro vokatry ny asany nefa ao anatin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2016, mamaritra fa tokony ho 3 255 ihany ny isan’izy ireo. Efa voatily ny 866 amin’ireo 1 339 tsy tokony hahazo ny tombontsoa intsony satria efa niala amin’ny toerana naha mpiasam-panjakana ambony azy. 3 miliara sy 656 tapitrisa Ar ny vola tsy nivoaka rehefa vita ny fanadihadiana.
Mahatratra 2 256 ny mpiasam-panjakana tsy tokony handray karama, nanomboka ny volana jona 2015, nahazoana vola 9 miliara Ar ny vola nijanona amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Ny sasany, efa feno 60 taona nefa tsy voakarakara ny antontan-taratasy fisotroan-dronono ka nandray karama tsy tapaka izy hatramin’ny fotoana nahitana ny tranga.
Hihatra manomboka amin’ny volana febroary izao ny fiakarana 7,5% amin’ny karaman’ny mpiasam-panjakana ary hisy ny « rappel » iray volana. Eo am-pikarakarana ny « décret » momba izany ny tomponandraikitra.